Fiara 4×4 nahafaty olona dimy : naiditra am-ponja any Moramanga ilay karana | NewsMada
Fiara 4×4 nahafaty olona dimy : naiditra am-ponja any Moramanga ilay karana
Ho fampitoniana ny vahoaka ? Asa, fa araka ny fantatra, naiditra am-ponja vonjimaika (MD) any Moramanga, omaly maraina, ilay karana nitondra ilay fiara 4X4, namoa-doza ka nahafaty olona dimy, ny alahady teo
Any am-ponja miandry ny fitsarana azy ilay karana nahavanon-doza tany Moramanga ny alahady teo. Nilaza ny lehiben’ny polisy any Moramanga, fa efa am-pelatanan’ny fitsarana ny raharaha, ka miantso ny vahoaka any an-toerana mba ho tony ry zareo.
Nahatezitra ny mponina rahateo ny zava-nitranga nataon’ity mpamily nitondra ny fiara ity, izay tsy fantatra mazava ny antony nanaovany izao famonoan’olona izao. Tratran’ny olona rahateo izy io ka niharan’ny daroka avy hatrany, ka raha tsy nisy ny polisy nisambotra nanavotra azy teo am-pelatanan’ny vahoaka, maty teo ilay rangahy.
Nentina teny amin’ny kaomisarian’ny polisy Moramanga izy io, ary nitaky ny hamoahana azy hanaovana fitsaram-bahoaka ny mponina. Voalazan’ny zandary fa manodidina ny 1.000 teo ny olona nitangorona nanoloana ny kaomisaria. Ilay fiara moa efa may sy potika nanalan’ny olona ny hatezerany teo. Vokatr’izay fitangoronan’ny olona izay, nandray andraikitra ny lehiben’ny distrika ka nampiantso ny kaompania sy ny brigady Moramanga nohon’ny fahasarotan’ny raharaha. Nentin’ny zandary tany amin’ny brigady Moramanga ilay mpamily ary notazonina tany.
Natolotra ny fitsarana omaly avy hatrany ilay karana mba nialana tamin’ny olana ary izao naiditra am-ponja any Moramanga izao miandry ny fotoam-pitsarana azy.
Mitory ny fianakaviana
Manoloana ity tranga ity, mitory avy hatrany ny tompon’ny fiara ny fianakavian’ireo maty sy niharam-boina. Olona dimy ireo maty: Randrianarison Julien, 58 taona ; Lantoniaina Saholimalala Julienne, 23 taona; Andrianantenaina Sandratiana, 4 taona ; ny brigadier de police Telolahy Jean Armand, 51 taona.
Raha tsiahivina kely ny zava-niseho, tamin’ny lalam-pirenena faha 2, PK 113 toerana atao hoe Tangaina, fokontany Moramanga ambony no nisehoan’ny loza. Tovolahy 25 taona monina eny Analamahitsy antsoina hoe Moramody Soafome no nitondra ny fiara. Nisy olona efatra hafa niaraka taminy ary naratra ny vehivavy iray. Rehefa nandalo teo amin’ny toerana fanakanan’ny polisy fiara sy fisavana, nofaohin’ilay fiara ilay polisy nanao ny asany. Nitsoaka ka mbola nandona olona efatra hafa, zaza 4 taona ny iray, ramatoa bevohoka telo volana, mpitondra bisikileta iray ary lehilahy, ilay 4×4. Nifatratra taorian’ny camion iray ny nampijanona io fiara io. Nifandroritahan’ny olona ary niharan’ny daroka ilay tovolahy. Ireo namany kosa tafatsoaka, ilay fiara nodoran’ny vahoaka.
Anisan’ny ahiahin’ny olona, amin’ity tranga ity, ny mety ho fahafahan’ilay mpamily mangingina any. Ny polisy efa nilaza fa efa any am-pelatanan’ny fitsarana ny raharaha. Samy miandry izay tohiny ny rehetra.
Une réponse à "Fiara 4×4 nahafaty olona dimy : naiditra am-ponja any Moramanga ilay karana"
obs 02/03/2016 à 14:42
In fa tsy volabe miditra hoan’ireo mpitsara indray zao ity raharaha ity, fa ny manamanjo no mampalahelo